ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းမှ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်
Htay Tint shared Moe Kyaw Oo's photo.
ဒီလို အဆင့်ဘဲရမယ် ။
မြောက်ပိုင်းက ထွက်ပြေးလာသူတွေနဲ့ ဆွေမျိုးတွေ
တောင်ပိုင်းက အသတ်ခံရသူ ဆွေမျိုးတွေကိုပါ
လူ ၂သောင်း လောက်ရှိခဲ့ဖူးတဲ့
ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့အရည်အချင်းက
ကြက်တူရွေး သာသာ ဖြစ်နေပါလား ။
အခုတောင် မျိုးဆက်သစ် အတွက်
ကျုပ်တို့ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့
အချိန်တွေ ချွေးတွေ သွေးတွေ အသက်တွေ
ပြည်သူလူထုက ထွီ လုပ်ကုန်ပြီ ။
ABSDF ကို ပြောလို့ နာရင်
တက်နိူင်အောင် ကူညီကြပါ ။
Unlike · · Yesterday at 12:10am ·
You, Nicky Shein, Robert Hla Tun and4others like this.
ဘရာဇီး ငှက်ရိုး စစ်အာဏာရှင်နဲ့ လူသတ်သမားတွေများ ကျောချင်းကပ်ထားလိုက်တာ မြင်လို့တောင် မကောင်းဘူး... ဟူးးးးးးးး
Yesterday at 12:11am · Like · 2
Py Oo Swe ကိုသံခဲတို့ အစည်းဝေးနေတဲ့ ဓါတ်ပုံကတော့ လက်တော့ပ်တွေ ကိုယ်စီကိုယ်ဌနဲ့ဗျ အုပ်စုလိုက်ကြီး နယ်စပ်တစ်နေရာမှာတဲ့ဗျာ ဦးအောင်မင်းပြောသွားတာ ကချင်ဘက်မှာ ABSDFမရှိတော့ဘူး ဆိုတဲ့ သဘောသက်ရောက်တာပေါ့ဗျာ နောက်တခါဆို ABSDF ကို မြေလှန်ပြစ်ပြီလို့ ပြောတော့မှာဘဲဗျ။
Naing Lay Htwe အမှန်တရားဟာ လုံခြုံတဲ့ တစ်နေရာကနေအချိန်ကိုစောင့် နေပါတယ်ရဲဘော်။သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကြည့် ခွင့် မရနိုင်လဲကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ မျိုးဆက်သွေးကရှင်သန်နေဦးမှာပါ။ရှင်သန်ထကြွဆူပွက်လာဦးမှာပါ။မမှန်တဲ့ လူတွေလားရာလမ်းတွေရှိပြီးသားပါရဲဘော်တို့ ။
Yesterday at 7:34am · Like
Htay Tint ဘုန်းကျော် စာခဲမှာက ABSDF ဗဟိုကော်မတီကတော့ ဒီစကားနဲ့ ပက်သက်ပြီးပြောတာက-
"ဟင့်အင်း....ကျနော်တို့ မှာ လဲစရာ သေနတ်အစုတ်ငါးလက်ပဲရှိတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ဖို့ ငွေလည်းမရှိဘူး။ ကပ်ပစတီလည်းမရှိဘူး။ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမှာ နေစရာအိမ်၊ စားစရာနဲ့ ငွေလည်းမရှိဘူး။ ဒီလိုနေတာကမှ ကောင်းသေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားများကိုယ်ပိုင်ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးပဲလိုချင်တယ်။ ဒီလိုဆိုရင် စားရသောက်ရတာ ပိုအဆင်ပြေတယ်" ဟု.....သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဖြစ်သူ ရထားမမောင်းဘူးတဲ့ ရထားဝန်ကြီးဟောင်းကို ရန်ကုန်မှာပြောခဲ့ပါကြောင်း။
Moe Kyaw Oo
လျှပ်တပျက်ဂျာနယ် အတွဲ(၄) အမှတ်(၁၆) စာ ၄၂ တွင် ဖော်ပြထားသည့်
Myo Win likes this.
Tamar Khin ဖတ်တော့ ဖတ်ချင်သား၊ ဘယ်လိုကြီးအောင်လုပ်ပြီး ဖတ်ရတယ် မသိ ဖြစ်နေလို့ ဗိုလ်ကျောက်ရေ၊
Wednesday at 5:36am
Mu Mu Htwe me too
Wednesday at 7:05am
Myo Win ကိုကျောက် စာလုံးက သေးတော့ ဖတ်လို့မရဘူး၊ ဘာတွေ ပြောထားတာလဲ။
Wednesday at 8:10am
Myat Thu Control နဲ့ + (အပေါင်း) ကိုနှိပ်ပြီးချဲ့ဖတ်လို့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး ပုံမှန်ဆိုဒ်ကိုပြန်သွားချင်ရင်တော့ Control+0 (သုည) ပါ။
Wednesday at 8:46am · 1
Myat Thu ပုံမှန်ဆိုဒ်ကို ပြန်သွားချင်ရင် Control0လို့ပြောတာပါ။
Wednesday at 8:49am
Kyi Kyi Khin ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပြီးချဲ့ဖတ်လဲ ရတာပဲ မလှိုင်။
Wednesday at 6:40pm · 1
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 8:16 PM
Labels: ဓါတ်ပုံဖိုင်, အထွေထွေသဘောထား